दक्षिण कोरियामा नयाँ राष्ट्रपति युन सक यल निर्वाचित, राजनितीमा उनको उदय कसरी भयो? – Eps Sathi
March 10, 2022 826
दक्षिण कोरियामा पिपल पावर पार्टीका उम्मेदवार युन सुक यल नयाँ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन। आगामी ५ बर्षका लागि बुधबार भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मतपरिणाम विहिवार विहान आएको थियो। युन सुक अहिले कोरियामा प्रमुख प्रतिपक्षीमा रहेको पार्टीबाट राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा लडेका थिए। युनले खसेको कुल मतको ४८.५९ प्रतिशत भोट पाएका थिए। उनका निकटतम् प्रतिदव्न्द्वी उम्मेदवार इ जे म्याङले ४७.८७ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका थिए। उनले सत्तासिन डेमोक्राटिक पार्टीका उम्मेदवारलाई झिनो मतान्तरले हराएका हुन।
एसियाको चोथौ ठूलो आर्थिक हैसियत भएको देश पाँच वर्षे कार्यकारी अधिकार पाएका युन हालका राष्ट्रपति मुन जे इनको प्रशासनमा महान्यायाधिवक्ताको रुपमा काम गरेका थिए । उनले पद तथा शक्तिको दुरुपयोग गरेकी तत्कालीन राष्ट्रपति फाक गुन हेलाई आफ्नोे अभियोगमा झन्डै २२ वर्ष जेल बस्नु पर्ने गरी भएको मुद्दालाई नेतृत्व गरेका थिए । सन् २०२० मा मुन जे इन सरकारले उनलाई पदबाट हटाएपछि आफू महान्यायाधिवक्ता भई रहनुपर्ने भन्दै अदालतमार्फत पदबहाली गरेर एकवर्ष अघिसम्म काम गरे ।
सन् २०२१ मा मात्रै महान्यायाधिवक्ता पदबाट राजीनामा दिएर उनी राजनीतिमा आएका थिए । छोटो समयमै राष्ट्रपति बन्न पुगेका उनी छिमेकी देश उत्तर कोरिया र जापानसँग कडा सम्बन्ध राख्नु पर्ने धारणा राख्छन् । महान्यायाधिवक्ता हुँदा श्रीमतीले विभिन्न ठाउँबाट फाइदा लिएको आरोपपछि विवादमा परेका थिए ।
राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि गरेको सम्बोधनमा उनले आफ्नो मुख्य लक्ष्य देशलाई एक सूत्रमा बाँध्ने रहेको बताए । ‘यो जित सबै जनताको हो । यो पिपल पावर पार्टीको मात्रै जित होइन । यो चुनावी अभियानमा मैले धेरै कुरा सिकेको छु । जब म राष्ट्रपतिको अफिसमा हुन्छु म देशको संविधान, संसद् र विपक्षी दल डेमोक्रटिक पार्टी सहकार्यबाट कार्यहरु गर्नेछु ।’
विजेता युनले १ करोड ६३ लाख ९४ हजार ८ सय १५ मत प्राप्त गरेका छन् भने ईजे म्याङले दुई लाख ४७ हजार ७७ कम मत पाएका छन् । यो अहिलेसम्म भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सबैभन्दा कम मतान्तर हो । यस अघि सन् १९९७ मा भएको १५ औं राष्ट्रपतीय चुनावमा किम दे जुङले इ हे चुङचलाई ३ लाख ९० हजार ५ सय ५७ मतले पराजित गरेका थिए।
Prevकोरियामा नयाँ राष्ट्रपतिका लागि आज चुनाव हुँदै, को होलान त नयाँ राष्ट्रपति?
Nextब्रेकिङ न्यूज, अब कोरिया प्रवेश गर्दा क्वारेन्टिन बस्नु नपर्ने, अरु केके भए निर्णय